Umenzi Wenqubomgomo Yobumfihlo | Ikhwalithi ephezulu nobuchwepheshe obuthuthukisiwe - I-Ever-Power
I-gearbox & Reducer & Motors
Ibhokisi legiya lezolimo
IHarmonic Gear Drayivu
Kuvunguza Bevel Gear
Ama-post hole diggers
Shaft & isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo & Coupling
PTO Drayivu Shaft
Isikhathi Belt Pulley
IVortex negesi Pump
Imoto Eqondiswa Ngokuzenzakalelayo
Umshini weMask Maski
Izindaba & Blog
Usuku Lokuqalisa: Agasti 1, 2017
Lesi saziso sobumfihlo siveza izinqubo zobumfihlo ze-EVER-POWER GROUP CO., LTD. Newebhusayithi yethu: https://www.ever-power.net. Lesi saziso sobumfihlo sisebenza kuphela kulwazi oluqoqwe yile webhusayithi, ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela. Izokwazisa ngokulandelayo:
Yiluphi ulwazi esiluqoqayo;
Izinguquko zenqubomgomo zizokwaziswa kanjani;
Ungakulungisa kanjani ukukhathazeka ngokusetshenziswa kabi kwedatha yomuntu siqu.
Collection Ulwazi, Sebenzisa, futhi Ukwabelana
Yithi kuphela abanikazi bolwazi oluqoqwe kulesi siza. Sikwazi kuphela ukufinyelela / ukuqoqa imininingwane osinika yona ngokuzithandela nge-imeyili noma omunye othintana naye ngqo. Ngeke sithengise noma siqashe lolu lwazi kunoma ngubani.
Sizosebenzisa imininingwane yakho ukuphendula wena, maqondana nesizathu osithinte ngaso. Ngeke sabelane ngolwazi lwakho nanoma yimuphi umuntu wesithathu ngaphandle kwenhlangano yethu, ngaphandle kokuthi kudingekile ukufeza isicelo sakho, isb. Ukuthumela i-oda.
Ngaphandle kokuthi ungasicela ukuthi singakwenzi, singathintana nawe nge-imeyili esikhathini esizayo ukukutshela mayelana nezici, imikhiqizo emisha noma amasevisi, noma izinguquko kule nqubomgomo yobumfihlo.
Ukufinyelela kwakho Kuzo Nokulawula Ngolwazi
Ungakhetha ukuphuma kunoma ibaphi oxhumana nabo bakusasa kithi nganoma yisiphi isikhathi. Ungenza okulandelayo nganoma yisiphi isikhathi ngokuxhumana nathi ngekheli le-imeyili noma inombolo yocingo enikezwe kuwebhusayithi yethu:
Bona ukuthi iyiphi idatha esinayo ngawe, uma ikhona.
Shintsha / lungisa noma iyiphi idatha esinayo ngawe.
Asisuse noma iyiphi idatha esinayo ngawe.
Veza noma yikuphi ukukhathazeka onakho ngokusebenzisa kwethu idatha yakho
Ukuze usebenzise le webhusayithi, umsebenzisi kufanele agcwalise ifomu lokubhalisa kuqala. Ngesikhathi sokubhalisa umsebenzisi uyacelwa ukuthi anikeze imininingwane ethile (efana negama nekheli le-imeyili). Lolu lwazi lusetshenziselwa ukuxhumana nawe ngemikhiqizo / nezinsizakalo esizeni sethu lapho ukhombise khona ukuthakaselwa. Ngokukhetha kwakho, unganikeza nemininingwane yabantu (efana nobulili noma iminyaka) ngawe, kepha ayidingekile.
Sicela imininingwane kuwe kwifomu lethu le-oda. Ukuthenga kithi, kufanele unikeze imininingwane yokuxhumana (njengegama nekheli lokuthumela) nemininingwane yezezimali (njengenombolo yekhadi lesikweletu, usuku lokuphelelwa yisikhathi). Lolu lwazi lusetshenziselwa izinhloso zokukhokha nokugcwalisa ama-oda akho. Uma sinenkinga yokucubungula i-oda, sizosebenzisa lolu lwazi ukuxhumana nawe.
Sabelana ngolwazi oluhlanganisiwe lwabantu kanye nabalingani bethu nabakhangisi. Lokhu akuxhunyiwe kunoma yimiphi imininingwane yomuntu engakhomba noma yimuphi umuntu.
Futhi / noma:
Sisebenzisa inkampani yokuthumela yangaphandle ukuthumela ama-oda, nenkampani esebenza ngekhadi lesikweletu ukukhokhisa abasebenzisi bezimpahla nezinsizakalo. Lezi zinkampani azigcini, zingabelani, zisebenzisa noma zisebenzisa imininingwane ebonakalayo kunoma yiziphi izinhloso ezingekho ngaphezulu kokugcwalisa i-oda lakho.
Sisebenzisana nelinye iqembu ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezithile. Lapho umsebenzisi ebhalisela lezi zinsizakalo, sizokwabelana ngamagama, noma eminye imininingwane yokuxhumana edingekayo ukuze umuntu wesithathu anikeze lezi zinsizakalo. Lawa maqembu akavunyelwe ukusebenzisa imininingwane ekhonjwayo uqobo ngaphandle kwenhloso yokuhlinzeka ngalezi zinsizakalo.
Sithatha izinyathelo zokuvikela imininingwane yakho. Lapho ufaka imininingwane ebucayi ngewebhusayithi, imininingwane yakho ivikelwe ngaphakathi ku-inthanethi naku-inthanethi.
Nomaphi lapho siqoqa khona imininingwane ebucayi (efana nedatha yekhadi lesikweletu), lolo lwazi lubhalwe ngemfihlo futhi ludluliselwa kithi ngendlela evikelekile. Ungakuqinisekisa lokhu ngokufuna isithonjana sokukhiya esivaliwe ezansi kwesiphequluli sakho sewebhu, noma ngokufuna i- “https” ekuqaleni kwekheli lekhasi lewebhu.
Ngenkathi sisebenzisa ukubethela ukuvikela imininingwane ebucayi edluliselwa ku-inthanethi, siphinde sivikele imininingwane yakho ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Abasebenzi kuphela abadinga ulwazi lokwenza umsebenzi othile (isb. Ukukhokhisa noma isevisi yamakhasimende) abanikezwa ukufinyelela kulwazi olungakhonjwa uqobo. Amakhompyutha / amaseva lapho sigcina khona imininingwane ekhomba umuntu uqobo igcinwa endaweni ephephile.
Sisebenzisa "amakhukhi" kuleli sayithi. Ikhukhi ucezu lwedatha olugcinwe kwi-hard drive yesivakashi sesiza ukusisiza sithuthukise ukufinyelela kwakho kusayithi lethu futhi sikhombe izivakashi eziphindayo kusayithi lethu. Isibonelo, lapho sisebenzisa ikhukhi ukukukhomba, ngeke kudingeke ungene ngemvume ngaphezu kwephasiwedi, ngaleyo ndlela ugcine isikhathi ngenkathi usesizeni sethu. Amakhukhi angasisiza futhi ukuthi silandele futhi siqondise izintshisekelo zabasebenzisi bethu ukuthuthukisa ulwazi lwabo kusayithi lethu. Ukusetshenziswa kwekhukhi akuhlangene nganoma iyiphi indlela nolwazi olukhomba umuntu uqobo kusayithi lethu.
Abanye babalingani bethu bebhizinisi bangasebenzisa amakhukhi kusayithi lethu (isb., Abakhangisi). Noma kunjalo, asinakho ukufinyelela noma ukulawula lawa makhukhi.
Le webhusayithi iqukethe izixhumanisi kwamanye amasayithi. Sicela wazi ukuthi asinacala ngokuqukethwe noma imikhuba yobumfihlo yamanye amasayithi. Sikhuthaza abasebenzisi bethu ukuthi bazi lapho beshiya isiza sethu futhi bafunde izitatimende zobumfihlo zanoma iyiphi enye isayithi eqoqa imininingwane engakhonjwa.
Ukusuka ngesikhathi sethu isayithi lethu licela ulwazi ngama-inhlolovo noma imiqhudelwano. Ukubamba iqhaza kulolu cwaningo noma imincintiswano kungokuzithandela ngokuphelele futhi ungakhetha ukuthi ungabamba iqhaza noma cha bese udalula lolu lwazi. Imininingwane eceliwe ingafaka imininingwane yokuxhumana (efana negama nekheli lokuthumela), kanye nemininingwane yabantu (njengekhodi ye-zip, iminyaka yobudala). Imininingwane yokuxhumana izosetshenziselwa ukwazisa abaphumelele kanye nemiklomelo yemiklomelo. Imininingwane yocwaningo izosetshenziselwa izinhloso zokuqapha noma ukwenza ngcono ukusetshenziswa nokwaneliseka kwalesi siza.
Noma nini lapho kwenziwa izinguquko ezibonakalayo kwisaziso sobumfihlo cacisa ukuthi uzokwazisa kanjani abathengi.
Eminye Imibandela Njengoba Kudingeka Ngokomthetho
Ezinye izinhlinzeko eziningi kanye / noma imikhuba kungadingeka ngenxa yemithetho, izivumelwano zamazwe omhlaba, noma izindlela zemboni. Kukuwe ukuthi unqume ukuthi imiphi imikhuba eyengeziwe okufanele ilandelwe futhi / noma ikuphi ukudalulwa okwengeziwe okudingekayo. Sicela uqaphele ngokukhethekile i-California Online Privacy Protection Act (CalOPPA), evame ukuchibiyelwa futhi manje efaka imfuneko yokudalula yezimpawu "Ungalandeleli".
Uma unomuzwa wokuthi asihambisani nale nqubomgomo yobumfihlo, kufanele uxhumane nathi ngokushesha nge-imeyili ku- [i-imeyili ivikelwe] .
Singomunye wabenzi nabahlinzeki abakhulu eChina, Khetha Abenzi Bekhwalithi, Abahlinzeki, Abathumela Kwamanye Amazwe ku-EVER-POWER.NET
Mail: [i-imeyili ivikelwe]
Sisebenza ngokukhiqiza i-Agricultural Gearbox, PTO Shafts, Sprockets, Fluid Coupling, Worm Gear Reducers, Gears and Racks, Roller Chains, Sheave and Pulleys, Planetary Gearboxes, Timing Pulleys, Shaft Collars and more.
Sithumele imikhiqizo yethu kumakhasimende emhlabeni jikelele futhi sathola idumela elihle ngenxa yekhwalithi yethu yomkhiqizo ophakeme kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva.
Samukela ngokufudumele amakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ukuthi axhumane nathi ukuxoxisana ngebhizinisi, ukushintshisana ngolwazi nokubambisana nathi.
Mayelana namandla onke
2001-2020 Iqembu Elinamandla Onke
Leli sayithi ivikelwe ngu-reCAPTCHA ne-Google Inqubomgomo yobumfihlo futhi Imigomo Yesevisi sebenzisa
Imininingwane engenhla ingeyokwabelana ngolwazi nokwethula imikhiqizo nabakhiqizi. injongo engeyona yokuhweba. Konke okuqukethwe kutholakala kunethiwekhi, i-athikili ingumbono wethu, uma kukhona ukwephulwa kwelungelo lobunikazi noma uthole imininingwane engathandeki, ngicela ungithinte, sizoyisusa ngokushesha. Ukusetshenziswa kwezinombolo zezingxenye zokuqala zomkhiqizi wemishini (i-OEM) noma izimpawu zokuhweba, isb. UJohn Deere® Comer Gearbox ® Bush Hog Gearbox® Omni Gear® njll. Kwenzelwa izinkomba kuphela futhi kukhombisa ukusetshenziswa komkhiqizo nokuhambisana nokubuyiselwa kwezingxenye zokuqala eziphukile. Inkampani yethu kanye nezingxenye ezifakwe ohlwini ezibhalwe lapha azixhasiwe, azivunyelwe, noma zenziwe yi-OEM.